डर्टमुन्डले हालान्डको स्थान लिने युवा खेलाडी भित्र्यायो !
बैशाख २९, २०७९ ST
एजेन्सी – युवा स्टार एर्लिङ ब्राउट हालान्डले क्लब छाड्ने पक्का भएसँगै जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमुन्डले उनको स्थानमा जर्मनीका युवा फरवार्ड करिम एडियमीलाई अनुबन्ध गरेको छ ।
नर्वेजियन युवा फरवार्ड हालाण्ड इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटी जाने पक्का भएपछि डर्टमुन्डले २० वर्षीय करिमलाई अस्ट्रियन क्लब आरबी साल्जबर्गबाट ५ वर्षको लागि अनुबन्ध गरेको हो । सम्झौता अनुसार जर्मन युवा प्रतिभा करिम उनी सन् २०२७ सम्म डर्टमुन्डमा रहनेछन् ।
एडियमी डर्टमुन्डले २०२२–२३ का लागि अनुबन्ध गरेका तेस्रो खेलाडी हुन् । यसअघि डर्टमुन्डले निकलस सुल र निको स्लोटरबेकलाई अनुबन्ध गरिकसकेको छ ।
‘करिम एडियमी एक प्रतिभाशाली जर्मन युवा फरवार्ड हुन् । उनको गति निकै उच्च छ,’ डर्टमुन्डका खेल निर्देशक माइकल जोर्कले भने, ‘यसबाहेक, एडियमीलाई बिभीबिको ठुलो माया छ । किनभने उनको मुटु पहिलेदेखि नै कालो र पहेलो रङमा धड्किरहेको थियो । उनले डर्टमुन्डबाट खेल्नको लागि मुख्य युरोपेली लिगहरूबाट धेरै प्रस्तावहरू अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका थिए ।’
एडियमीले डर्टमन्डलाई बाल्यकालदेखि नै पछ्याइरहेको र बालापनमा डर्टमुन्डको तीव्र गतिको फुटबलबाट मोहित रहेको बताए । ‘मैले नै डर्टमुन्डसँग दीर्घकालीन सम्झौता गरेको हुँ । किनभने म विश्वस्त छु कि हामी एक रोमाञ्चक टोली हुनेछौं । उत्कृष्ट प्रशंसकको समर्थनमा खेल्न र उपाधि जित्न सक्षम छौं । त्यसैले मलाई डर्टमुन्ड आउन सहज भयो,’ उनले भने ।
करिमले यो सिजन साल्जबर्गका लागि ३३ गोल गरेका छन् । जर्मनीको विभिन्न उमेर समूहमा प्रतिनिधित्व गर्दै उनले २०२१ म सिनियर टोलीमा डेब्यु गरिसकेका छन् । उनले जर्मनीका लागि ३ क्याप जित्दा १ अन्तर्राष्ट्रिय गोल गरिसकेका छन् । उनले तीन पटक अष्ट्रिय बुन्डेसलिगा, तीन अष्ट्रियन कप र जर्मनीबाट युइएफए यु–२१ युरो कप जितेका छन् ।
प्रकाशित : बिहिबार, बैशाख २९, २०७९१०:१३
सिटीमा सर्वाधिक कमाउने खेलाडीको सुचिमा हालान्ड ! कति पाउँछन् पारिश्रमिक ?